चीन मार्बल विसारक, संगमरमरको अरोमा विसारक, मार्बल तेल विसारक निर्माता
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] व्यवसाय प्रकार:Manufacturer मुख्य बजार: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide निर्यातक:61% - 70% Certs:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report, BSCI विवरण:मार्बल विसारक,मार्बल अरोमा विसारक,संगमरमरको तेल विसारक,मार्बल अत्यावश्यक तेल विसारक,,
Home > उत्पादनहरू > मार्बल विसारक
मार्बल विसारक को उत्पाद कोटिहरु, हामी चीन, मार्बल विसारक , मार्बल अरोमा विसारक आपूर्तिकर्ताओं / कारखाना, संगमरमरको तेल विसारक आर एन्ड डी को थोक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पादनहरु र विनिर्माण देखि विशेषज्ञता प्राप्त गर्दै छन्, हामी एकदम सही पछि बिक्री सेवा र प्रौद्योगिकी समर्थन छ। तपाईंको सहयोगको लागि अगाडि हेर्नुहोस्!
चीन मार्बल विसारक आपूर्तिकर्ता
समायोज्य धुंध आउटपुट: आवश्यक तेलको लागि संगमरमर डिफ्यूजरले २०० मिलीलिटर पानी समात्छ। यो 6-6 घण्टा सम्म चल्छ। मिस्टिंगको अवधि समायोजन गर्न उच्च र तल्लो झुम्का बीच स्विच गर्न लामो प्रेस गर्नुहोस्।
--र LED एलईडी बत्तीहरू: हाम्रो मार्बल अरोमा डिफ्यूजरमा सात र color्गको एलईडी बत्तीहरू उज्यालो र डिमको बीचमा समायोजित गर्न सकिन्छ, तपाईं चक्र र colors्ग रोक्न सक्नुहुन्छ र न्यानो र आरामदायी वातावरण सिर्जना गर्न तपाईंको मनपर्दो रंगमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
टाइमर सेटिंग्स: setting प्रकारका समय सेटिंग मोड: १ एच / H एच / H एच / अन। संगमरमरको तेल डिफ्यूजरले स्वचालित रूपमा शक्ति बन्द गर्दछ जब पानीको स्तर अत्यन्त कम हुन्छ। जब एयर ह्युमिडिफायर डम्पि, हुन्छ, यसले स्वचालित रूपमा काम गर्न रोक्दछ।
अरोमा विसारक अल्ट्रासोनिक टेक्नोलोजी: यो आवश्यक तेल गन्ध विसारक कार्य एकदम शान्त छ। चिसो धुंध र रमणीय सुगन्ध प्रदान, जाडोले नरम र सुक्खा दरारिएको छाला पोषण दिन सक्छ। यसले तपाईंलाई राम्रो सास फेर्न पनि मद्दत गर्दछ जब तपाईं एयर कन्डिशनरमा सुत्नुहुन्छ।
नयाँ अपग्रेड डिजाइन: अद्वितीय उपस्थिति-क्लासिक सेतो संगमरमरको साथ आवश्यक तेलको लागि सुगन्धित विसारक। प्राकृतिक, हानिरहित सामग्रीबाट बनेको। यो आधुनिक समारोह भेट्दछ, जुन कुनै सजावटको साथ उपयुक्त हुन्छ कि एक राम्रो सजावट टुक्रा हुन सक्छ। हाम्रो घर विसारक पनि तपाईंको परिवार वा प्रेमीको लागि एक उत्तम वेलेंटाइन दिवस उपहार हो।
मार्बल अरोमा विसारक
संगमरमरको तेल विसारक
मार्बल अत्यावश्यक तेल विसारक
कार तेल विसारक